Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Xaflada Caleema saarka oo la kulmay Xaaf – Kalfadhi
March 24, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Galmudug Yuusuf Garaad Cumar, ayaa magaalada Galkacyo kula kulmay Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo kamid ah dhinacyadii sheegtay in ay yihiin madaxweynayaasha maamulkaasi.
Inkastoo, Ahmed uu keli ku noqday siyaasiyiintii sheeganayay madaxweynayaasha ayaa haddana wali waxaa uu kasoo hor-jeedaa doorashadii Dhuusamareeb ee lagu doortay Axmed Qoorqoor.
Guddoomiyaha Guddiga, ayaa yiri “caawa ayaan gurigiisa Gaalkacyo salaan ugu tegey Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf. Sheekooyin dhinacyo badan oo aan isla soo qaadnay ayaa isugu jiray dhacdooyin hore, kuwo hadda taagan, mustaqbalka Galmudug iyo guud ahaanba siyaasadda dalka”.
“Xushmad weyn iyo qaddarin ayuu ka mudan yahay Galmudug, Federaal iyo Soomaali oo dhan”.
Ilaa iyo hadda ma cadda haddii Ahmed uu la heshiinayo Madaxweynaha iyo haddii kale, madaama xildhibaanno federal ah oo kasoo horjeeday doorashada Qoor-Qoor, ay dhawaan la kulmeen madaxweyne Qoor-Qoor isla markaana ay ka wada hadleen mustaqbalka Galmudug.